Madaxda Soomaaliya oo kusoo kordhayo Cadaadiska Beesha Caalamka | KEYDMEDIA ENGLISH
Madaxda Soomaaliya oo kusoo kordhayo Cadaadiska Beesha Caalamka
Ilaa iyo sanadkii hore, 80% ee 275-ka kursi ee Golaha Shacabka ayaa la soo gabagabeeyay 15-kii bishii Maarso, halka 20% aan la soo xulin sababo la xiriira khilaafyada beelaha iyo madaxda siyaasadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Jimcihii shalay, Saaxiibada Beesha Caalamiga ah ee Soomaaliya waxay soo saareen bayaan wadajir ah, oo ay ugu baaqeen madaxda siyaasadda dalka inay si deg deg ah oo wax ku ool ah u helaan habraaca doorashada kuraasta Aqalka Hoose ee harsan ka dib markii Puntland, Hirshabelle iyo Jubbaland ay ku kulmi waayeen. kama dambaysta ah ee March 15.
Waxaan si adag ugu baaqaynaa dhammaan daneeyayaasha Soomaaliyeed in ay ku xalliyaan wax kasta oo caqabad ku ah dhamaystirka hannaanka doorashada ee ka harsan goobaha cod bixinta si wada-hadal iyo is-afgarad ah, si si deg-deg ah oo kalsooni leh loogu soo gabagabeeyo doorashada,' ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka.
Saaxiibada Caalamka ayaa ku booriyay madaxda Soomaalida inay ku dhawaaqaan u diyaar garowga hab cadaalad ah oo dhex dhexaad ah oo lagu soo dooranayo guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Baaqan ayaa imaanaya kadib markii guddiga doorashada heer federaal [FEIT] ay 14-ka bishan April u qabteen dhaarinta xildhibaanada cusub, waxaana tallaabadaas ku gacan seyray Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Jubaland iyo Hirshabeelle ayaa lagu wadaa in ay soo doortaan 33-ka kursi ee harsan maadaama is mari waaga Beledweyne iyo Garbahaarey uu noqday caqabad. Waxaa jira cadaadis ka imaanaya Mareykanka oo laba jeer xayiraad fiisaha ah ku soo rogay hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee dalka.
Marka doorashada la soo gaba gabeeyo, 54-ta xubnood ee Senatka iyo 275-ka xubnood ee Aqalka Hoose ayaa fadhi wadajir ah ku yeelanaya Muqdisho, si ay u doortaan madaxweyne cusub oo laga yaabo in uu dhaco 2022-ka, sida ay KON u sheegtay.
Soomaaliya oo muddo dheer fowdo ku jirtay ayaa gashay qalalaase siyaasadeed, waxaana soo food saartay hubanti la’aan mustaqbalka ku aaddan kaddib markii uu madaxweynaha xilka ka degaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sannadkii hore laba jeer sameeyay afgambi dhicisoobay.